Abavelisi kunye nababoneleli be-Ion - China i-Ion Transmitter / Ion Sensor Factory
Imitha ekwi-Intanethi i-T4010
Imveliso ye-Intanethi ye-Ion yemitha yinkqubo yokujonga umgangatho wamanzi kwi-Intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Inokuxhotyiswa nge-Ion
Isenzisi esikhethiweyo seFluoride, iChloride, iCa2 +, K +, NO3-, NO2-, NH4 +, njl.
Imitha ekwi-Intanethi i-T6010
Imveliso ye-Intanethi ye-Ion yemitha yinkqubo yokujonga umgangatho wamanzi kwi-Intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Inokuxhotyiswa nge-Ion sensor ekhethiweyo yeFluoride, iChloride, i-Ca2 +, K +,
NO3-, NO2-, NH4 +, njl.
Imitha ekwi-Ion T6510
CS6514 Ammonium ion woluvo
Ion i-electrode ekhethiweyo luhlobo lwenzwa ye-electrochemical esebenzisa i-membrane enokubakho ukulinganisa umsebenzi okanye uxinzelelo lwe-ion kwisisombululo. Xa idibana nesisombululo esinee-ion eziza kulinganiswa, ziya kuthi zivelise uqhagamshelo kwisenzi kwi-interface phakathi kwenwebu yayo ebuthathaka nesisombululo. Umsebenzi we-Ion unxulumene ngqo nokubakho kweembrane. Ion electrode ezikhethiweyo zikwabizwa ngokuba yi-membrane electrode. Olu hlobo lwe-electrode lunembumba ekhethekileyo ye-electrode ethi iphendule ngokukhethekileyo kwiion ezithile. Ubudlelwane phakathi kwamandla e-membrane ye-electrode kunye nomxholo we-ion oza kulinganiswa uhambelana nefomula yeNernst. Olu hlobo lwe-electrode lunempawu zokukhetha okuhle kunye nexesha elifutshane lokulinganisa, liyenza ibe yeyona nto isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwisalathi yovavanyo olunokubakho.
CS6714 Ammonium Ion woluvo
CS6518 Calcium ion woluvo
I-calcium electrode yinyani ye-PVC ebuthathaka ye-calcium ion electrode ekhethiweyo enetyuwa ye-phosphorus njengesixhobo esisebenzayo, esetyenziselwa ukulinganisa uxinzelelo lwe-Ca2 + ion kwisisombululo.
CS6718 Ukuqina woluvo (Calcium)
Ukusetyenziswa kwe-calcium ion: Indlela ye-calcium ion ekhethiweyo ye-electrode yindlela efanelekileyo yokumisela umxholo we-calcium ion kwisampuli. I-calcium ion electrode ekhethiweyo ihlala isetyenziswa kwizixhobo ezikwi-Intanethi, ezinje ngokujonga umxholo we-calcium ion ye-intanethi, i-calcium ion electrode ekhethiweyo ineempawu zemilinganiselo elula, impendulo ekhawulezileyo nechanekileyo, kwaye inokusetyenziswa kunye ne-pH kunye ne-ion yeemitha kunye ne-calcium ekwi-intanethi Abahlalutyi be-ion. Isetyenziswa kwakhona kwii-elektro ezikhethiweyo ze-electrode ze-electrolyte analyzers kunye ne-flow flow analyzers.
CS6511 Chloride Ion woluvo
Inzwa ekwi-intanethi ye-chloride ion isebenzisa i-membrane eqinileyo ye-elektroniki ekhethiweyo yokuvavanya ion ion chloride edadayo emanzini, ekhawulezayo, elula, echanekileyo neyoqoqosho.
CS6711 Chloride Ion woluvo
CS6510 Fluoride Ion woluvo
I-fluoride ion ekhethiweyo ye-electrode yi-electrode ekhethiweyo ebuthathaka kwi-ion fluoride ion, eyona ixhaphakileyo yi-lanthanum fluoride electrode.
I-Lanthanum fluoride electrode sisenzwa esenziwe nge-lanthanum fluoride yikristale enye ene-europium fluoride enemingxuma ye-lattice njengezona zinto ziphambili. Ifilimu yekristale ineempawu zokufuduka kwe-fluoride ion kwimingxunya ye-lattice.
Ke ngoko ine-conductivity efanelekileyo ye-ion. Sebenzisa le membrane ye-crystal, i-fluoride ion electrode inokwenziwa ngokwahlula izisombululo ezibini ze-fluoride ion. Isivamvo se-fluoride ion sensor sinokulingana kokukhetha kwe-1.
Kwaye phantse akukho khetho kwezinye ion kwisisombululo. Ion kuphela ngophazamiseko olomeleleyo yi-OH-, eya kuthi isabele nge-lanthanum fluoride kwaye ichaphazele ukumiselwa kwee-fluoride ion. Nangona kunjalo, inokuhlengahlengiswa ukumisela isampulu pH <7 ukunqanda olu phazamiseko.
CS6710 Fluoride Ion woluvo
CS6520 Nitrate electrode
Zonke ii-electrode zethu ze-Ion Selective (ISE) ziyafumaneka kwiimo ezininzi kunye nobude ukuze zilungele iintlobo ezahlukeneyo zezicelo.
Ezi I electrode ezikhethiweyo ze-Ion ziyilelwe ukusebenza ngayo nayiphi na imitha ye-pH / mV yale mihla, i-ISE / imitha yoxinaniso, okanye isixhobo esifanelekileyo se-on-line.
Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Ph woluvo Electrode, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll,